တရုတ်နိုင်ငံက အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ငြိမ်းချမ်းရေးထိန်းသိမ်းမှုစစ်ရေးလေ့ကျင့်ရေးလုပ်ဆောင် - Xinhua News Agency
ကျန်းကျိုး၊ စက်တင်ဘာ ၇ ရက် (ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံ၌ ပြီးခဲ့သည့် တနင်္လာနေ့တွင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ငြိမ်းချမ်းရေးထိန်းသိမ်းမှု စစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်း အဖြစ် “ကံကြမ္မာအကျိုးတူဖော်ဆောင်ခြင်း-၂၀၂၁” ဟု အမည်ရသော စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှု လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။
ယင်းစစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုသည် အမျိုးသားအဆင့်ကဏ္ဍစုံ လက်တွေ့လုပ်ဆောင်သည့် ငြိမ်းချမ်းရေး ထိန်းသိမ်းမှုဆိုင်ရာပူးတွဲလေ့ကျင့်မှုဖြစ်ပြီး တရုတ်နိုင်ငံတပ်မတော်မှ ဦးဆောင်လေ့ကျင့်မှု အနေဖြင့် ပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်သည်။ ယခုစစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုတွင် တရုတ်နိုင်ငံအပါအဝင် မွန်ဂို၊ ပါကစ္စတန်နှင့် ထိုင်းနိုင်ငံမှ စစ်တပ်များပါဝင်သည်။
စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုကို တရုတ်နိုင်ငံ အလယ်ပိုင်း ဟဲနန်ပြည်နယ် ရှိ တရုတ်ပြည်သူ့လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PLA ၏ လက်နက်ပေါင်းစုံ လေ့ကျင့်ရေးကွင်း၌ ကျင်းပခဲ့သည်။
အဆိုပါလေ့ကျင့်မှုတွင် နိုင်ငံပေါင်းစုံမှ ငြိမ်းချမ်းရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ပြီး လေ့ကျင့်ရေးလုပ်ဆောင်ရာတွင် နိုင်ငံတကာ အဆင့်မြင့်နှင့် ပကတိ အခြေအနေ စံချိန်စံညွှန်းများနှင့် ကိုက်ညီသည့် စစ်မြေပြင်အနေအထားနှင့်အတတ်နိုင်ဆုံးတူညီအောင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။
စစ်မြေပြင်ထောက်လှမ်းရေးလေ့ကျင့်မှုများ၊ လုံခြုံရေးစောင့်ကြပ်မှုနှင့်ကင်းလှည့်ခြင်း၊ လက်နက်ကိုင်အစောင့်အရှောက်များ၊ အရပ်သားများအားအကာအကွယ်ပေးခြင်း၊ ဆူပူအုံကြွမှုများနှင့်အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ခြင်းများအားတုံ့ပြန်ခြင်း၊ ယာယီစစ်ဆင်ရေးအခြေစိုက်စခန်းတည်ဆောက်ခြင်း၊ စစ်မြေပြင်ရှေး ဦး သူနာပြုစုခြင်းနှင့် ကပ်ရောဂါထိန်းချုပ်ခြင်းတို့ အား ဆောင်ရွက် သွားမည်ဟုသိရသည်။
တရုတ်နိုင်ငံသည် ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေးကောင်စီ အမြဲတမ်းအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများထဲတွင် တပ်ဖွဲ့အင်အားအများဆုံး စေလွှတ်ထားသည့်နိုင်ငံဖြစ်သည်။ ပြီးခဲ့သည့် ဆယ်စုနှစ် ၃ ခုအတွင်း တရုတ် လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များသည် ကုလသမဂ္ဂ၏ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ် ၂၅ ခုအတွက် ငြိမ်းချမ်းရေးတပ်သားပေါင်း ၅၀,၀၀၀ ခန့် စေလွှတ်ပေးခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။
GLOBALink | China holds international peacekeeping drill
ZHENGZHOU, Sept.7(Xinhua) –China on Monday started holding an international peacekeeping drill code-named “Shared Destiny-2021.”
The drill is held atacombined-arms tactical training base of the Chinese People’s Liberation Army (PLA) Army in central China’s Henan Province.
Scheduled to run through Sept. 15, the drill is organized for the purpose of responding to the UN’s “Action for Peacekeeping” initiative, promoting practical cooperation and making joint efforts to enhance the peacekeeping standby forces’ capability of carrying out tasks.
China is the largest troop contributor among the permanent members of the UN Security Council.
Over the past three decades, China’s armed forces have sent about 50,000 peacekeepers to 25 UN peacekeeping missions.
Currently, 2,241 Chinese peacekeepers are serving at UN headquarters and in seven mission areas.